Mase Data ka iPhone in Windows Phone
Habka 1: Saxiixa Wax walba Shakhsi
Tani waxay u muuqan kartaa argagax, buts runtii ma aha. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa wakhti yar oo lacag la'aan ah gacmahaaga.
Si ay u gudbiyaan Xidhiidhada:
Haddii aad xiriirka la leedahay waxaa la synced la xisaab email ah, aad xisaabta Gmail, tusaale ahaan, in aad si fudud u samayn kartaa in lagu xisaabiyo aad telefoon cusub daaqadaha iyo xiriirada oo dhan ayaa la heli karaa si aad u doona telefoonka.
Haddii si kastaba ha ahaatee, xiriirada aad ku sugan tahay iPhone laftiisa, raac tallaabooyinkan:
1. Download iyo rakibi Lugood on your computer laptop ama haddii aad horey ma u leeyihiin. Sug rakibo si ay u buuxiyaan oo ay maamulaan Lugood.
2. Isku aad iPhone in aad laptop ama computer.
3. Marka Lugood u bilawday, guji "iPhone" ka dibna riix "Info" oo xulo "Outlook". Hubi in "Xiriirada nidaameed" Doorashadan waa karti, haddii aan, si fudud guji ay checkbox baahisey in ay awood.
4. Laga soo xulashada ay muujiyaan ilaa, ay doortaan xiriirada doonayo si ay u gudbiyaan oo guji "codso".
5. xisaab aad ka iPhone oo dhan waxaa loo wareejin doonaa koontada Muuqaalka aad. Hadda si fudud aad u baahan tahay inaad ka sameysataa xisaab Muuqaalka aad ku saabsan telefoonka Windows oo aad noqon doonaa wanaagsan si ay u tagaan!
Si aad u wareejin Messages:
Waxaa wax laga xumaado, waxaa jira jid lahayn si toos ah in baaq loo diro aad iPhone in aad telefoon daaqadaha. Waxaa jira wax badan oo ay bixisay xisbiga saddexaad si kastaba ha ahaatee Apps, oo kaa caawin kara in nidaamka laakiin xitaa waxay leeyihiin hal xaddidaadda daran; oo keliya ay u gudbiyaan farriimo aad si aad laptop ama computer oo ah qaab PDFs ama faylasha CSV. Xitaa gurmad Lugood kaliya kuu ogolaanayaa inaad la abuuro file a .mdd oo ka mid ah fariimaha in la arki karaa oo keliya on your laptop ama computer, iyadoo la isticmaalayo buugayga.
Si aad u wareejin Photos:
Habka ugu fudud ee gacanta lagu wareejiyo photos dhaxeeya iPhone iyo daaqadaha phone waa ay hore kaga dayanayaan in aad laptop ama computer ka dibna kaga dayanayaan, kuwaas oo sawiro ka laptop / computer si ay telefoonka daaqadaha.
1. Si fudud isku xira aad iPhone in aad laptop ama computer. Laga soo bilaabo Explorer Windows ah, aad u hesho iPhone dooro sawirrada ah oo dhan oo haya ama riixaya Ctrl + ama haysta hoos muftaaxa Shift halka xulashada sawiro shakhsi.
2. Marka dhan photos doonayo ayaa lagu soo xulay, xaq guji dooro "Copy" ama "yaree" sida aad u doonayo. Tag goobta la doonayo on your laptop ama computer, iyo xaq click; ka menu ka muuqata dooro "dhaji". Sug oo dhan sawirrada si aad u wareejiyo.
3. Hadda lifaaq aad telefoon daaqadaha si laptop / computer la mid ah. Tag goobta oo dhan photos in lagu wareejiyay meesha ay joogaan iyo iyaga dooro adigoo riixaya Ctrl + a. Meel aad telefoon daaqadaha adigoo sahamisa file iyo paste photos ee folder la doonayo ay si fudud u geli doona goobta in oo ku cidhiidhinaya Ctrl + v.
4. phots aad All laga heli doonaa si aad daaqadaha iyo waxaa laga daawan karaa foomka waxaa si toos ah.
Si aad u wareejin Music:
1. Download app Phone Windows halkan
2. Ku rakib app Phone Windows aad laptop ama computer.
3. Kadib markii uu dhamaystay rakibo abuurtaan app ah oo taga si Settings music nidaameed, videos oo dheeraad ah oo lagaga> Lugood.
4. Hadda si hagaagsan oo dhan music si aad telefoon daaqadaha, si ay u tagaan PC Music. Hubi "nidaameed Music" doorasho.
5. Si aad u hagaagsan oo dhan music ah in aad kaliya laga soo wareejiyay Lugood aad, dooro "nidaameed music oo dhan" oo guji "nidaameed".
6. in aad nuqulka music soo xulay oo keliya, si kastaba ha ahaatee, kaliya dooro albums ama playlists in aad rabto in lagu wareejiyo si aad telefoon daaqadaha.
Si ay u gudbiyaan Calendar:
1. Daahfurka Lugood on your computer laptop ama halka aad iPhone xiran yahay, waxa uu.
2. Dooro "iPhone" ka Lugood, ka tab "Info", hubi "nidaameed Calendar leh" oo guji "Outlook".
3. Dooro jadwalka in aad rabto in lagu wareejiyo si aad telefoon oo guji "codso".
4. Tirsiga taariikhda waxaa loo wareejin doonaa koontada Muuqaalka aad. Mar kasta oo aad sameysataa xisaab Muuqaalka si aad u telefoonka daaqadaha, waxaad ka heli doontaa jadwalka ku saabsan telefoonka dhakhso leh.
Dad badan oo shaqo gacana looga baahan yahay, waqti badan ku lug leh
No habka ay u gudbiyaan farriimo
Habka 2: Isticmaalka Mobiletrans Wondershare
Sida loo Photos, Videos, Music files wareejiyo ka iPhone in WinPhone.
Talaabada 1: Wondershare Mobiletrans Open on your computer iyo isku xirka iPhone iyo WinPhone in kombiyuutarka. Mobiletrans recogize doonaa labada qalabka dhowr ilbiriqsi.
Talaabada 2: Mobiletrans Wondershare taageeri karaan si ay u gudbiyaan Photos, Videos, Music files si toos ah uga iPhone in WinPhone. Dooro noocyada file aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan oo guji Start Transfer ka. Faylasha ayaa loo wareejin doonaa phone bartilmaameedka in dhowr daqiiqo. Fadlan ha barkinta labada qalabka inta ay socoto.
Habka 3: Isticmaalka SHAREit App
App SHAREit waa aalad si xor ah laga heli karaa labada daaqadaha ciyaari dukaanka iyo Lugood. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso si aad sawiro, videos, music iyo xiriirada ka iPhone in aad daaqadaha telefoonka iyo qeybsanaan ku xigeenka. Dhammaan waxay u baahan tahay waa xidhiidh Wi-Fi firfircoon oo ay qaadanayso daryeelka ee inta kale ee habka aad u.
Si aad u bilaabin isticmaalka SHAREit in ay xogta ka iPhone wareejiyo telefoonka daaqadaha, raac tallaabooyinkan:
1. Download SHAREit aad iPhone ka
2. Download SHAREit u phone yout daaqadaha ka.
3. labada aaladaha aad xirmaan shabakad caadi Wi-Fi, network guriga aad tusaale ahaan. Burcad SHAREit labada iyaga ka mid ah.
4. Dooro "Send" ikhtiyaarka ka screen ugu weyn ee app ku saabsan iPhone iyo "Aqbala" ka screen ugu weyn ee app ku saabsan telefoonka daaqadaha.
5. Dooro files in aad rabto in aad ku wareejin ka iPhone in aad telefoon daaqadaha iyo weeraray "Transfer". Ku celi Tallaabada 4 in ay doortaan xog dheeraad ah oo ku sii diraya!
Easy in ay isticmaalaan, oo lacag la'aan ah, waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dirto xogta ee xawaaraha sare ee aan islana shaqada buugga. Markii ay u shaqayso, waxaa laga cabsado, marka aan shaqayn, ma jirto sabab in ay mar kale isku dayaan.
Shaqeynta No si ay u gudbiyaan farriimo ama jadwalka.
2 Siyaabaha ka iPhone wareejiyo music in android
> Resource > Transfer > Sida loo Demi Data ka iPhone in Windows Phone